Warbixin:- Halyeey aaan la hilmaami doonin (Hodon Naaleeye) “Maxaa lagu xusuustaa”. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaWarbixin:- Halyeey aaan la hilmaami doonin (Hodon Naaleeye) “Maxaa lagu xusuustaa”.
July 16, 2019 marqaan Faalloyinka, Somali News 3
Allaha unxariistee Walaasheen Hodon Naaleeye waxay ku dhalatay magaalada laasacaanood ee gobolka sool sannadkii 1976,iyadoo waxbarashadeedii hoose kusoo qaadatay halkaasi, kadibna iyadoo da’yar ayey u safartay wadanka kanada markii dagaalada Sokeeye ay dalka ka bilowdeen
waxay wax barshada dugsiga sare kaga baxaday Machadka West Humber halka heerkeeda koowaad ee Jaamacadda ay ka soo qalin jabisay Jaamacadda Windosor,iyadoo sidoo kale shahaado dheeri ah ka qaadatay kuliyadda Saxaafadda.
Markii ay jaamacada ka qalin jabisay ayey bilowday barnaamijka is-dhex-galka integration oo ah barnaamij muuqaalaad ka bixi jiray Tvga kaasoo ka hadlaya isdhexgalka barnaamijkaas waxay markii dambe ka baahin jirtay youtube-ka si ay u sheegto “sheekooyin wanaagsan” ee soomaalida uguna dhiirrigeliso kuwa qurba-joogta ah ee la halgamaya nolosha
Maadaama ay aheyd gabar wariye ah oo aadna ugu wanaagsan xirfadda saxaafada ayey go’aansatay inay codkeeda ku taageerto dadka iyo dalka Soomaaliya oo ka soo kabanaayey colaado iyo dagaalo sokeeye, waxayna sameysay barnaamijyo wax ku ool ah oo ka hadlaya horumarka ballaaran ee kajira dalka iyadoo booqatay goobo badan oo dalxiiska ku wacan kuwaasoo ay kula kulantay dad badan oo soomaaliyeed oo xitaa qaarkood dalka dibadiisa ka yimid si ay dalka u maalgashtaan. Goobaha inta badan ay booqanaysay waxaa kamid ah gobolka sool gaar ahaan magaalada laasacano oo ah meesha ay kaoo jeeddo. Hakaasoo ay kazoo diyaarisay barnaamij badan oo ku ool ahaa.
‘U jeedkeeda ugu weyn waxa uu ahaa in fikradaha aan wanaagsanayn ee waddamada reer galbeedka ay Soomaliya ka aaminsan yihiin meesha ka saarto oo ay muujiyo wanaagga soomaaliya oo markasta dadka waxa ay u sheegi jirtay in soomaaliya ay mustqabal ifayo leedahay ” ayuu intaasi ku sii daray weriye ilka case.
Markii ugu horeysay ee ay ka soo safartay kanada waxay aheyd sanadkii 2011 markaasoo ay timid xeryaha qaxootiga Kenya ee dhadhaab halkaasoo ay dagaanaayeen boqolaal kun oo qaxooti soomaaliyed, waxayna halkaasi kula kulantay dad badan oo soomaali iyo ajanabi isugu jira kuwaasoo ay kala hadashay xaalada wadanka soomaaliya, waxaana markaas la socotay Allaha unaxariistee Saado Cali Warsame.
Allaha unaxariistee waxay Hodon aheyd gabar wanaagsan, Akhlaaq leh, qalbi furan, dadka jecel, markastana dhoolacadeysa, waxaana markasta oo ay meel booqata kusoo xoomi jirtay dhalinyarada oo aad ujeclaa hayaankeedi, kuwaasoo ay kudhiiragalin jirtay inay ishorumariyaan.
Sidoo kale waxay inbadan tusaale u aheyd gabdho badan oo soomaaliyeed oo daawan jiray barnaamijyadeeda aadna uga heli jiray siiba kuwa kujira mihnada warbaahinta, si gaar ahna Waxaan ugu xusuustaa halkudhigeedii dhiiragalinta ahaa ee #naag iska dhig.
“warbaahinta bulshada ayaa bedeshay korna u qaaday barashada dadka ee arimaha dhaqanka ayey tiri Hodon “
Walaasheen Hodon intii ay ku guda jirta halgankeedi waxay caalamka ka gadday Wadankeenna iyadoo muuqaalo, iyo sawirro fiican ka sameysay dalka, taasoo keentay in qurba joog badan ay kudhiiradaan imaanshaha wadankeenna.
“ waxaan doonayaa inaan usoo tabiyo dadku sheekooyinka ku saabsan afrika. Hadafkeygana waa inaan dadka hoga tusaaleeyaa oo aan badelaa ayey tiri waxay hadalkan u sheegtay bbc africa horaantii sanadkan,waxayna intaas kudartay in ay sii wadi doonto oo ay sii kordhin doonto sheekooyinka wanaagsan ee kor u qaadaya maskaxda iyo dhiirigelinta dhalinyarada soomaaliyeed ee adduunka ku nool si u Aaminaan una jeclaadaan wadankooda.
“Wadnaheyga waxaa ku dhex nool Soomaaliya MArkastana waxaan jeclahay inaan barto dalkeyga, dadkeyga, Afkeyga iyo diinteydaba. Ayey tiri mar ay hadleysay.
Hadalada dadka aadka u soo jiitay intii ay nooleyd oo ay tiri waxaa kamid ahaa “riyadeyda ma aha inaan caan noqdo ama aan lacag sameeyo,ee waxaan isweydiiyaa maxaad ka tageysaa haddii aad dhimato.
Jacayl ay u qabto dadlka iyo dadkaba ayaa suuragaliyey inay si rasmi ah Hodon ugusoo guurto soomaaliya, gaar ahaan magaalada kismaayo halkaasoo ay ku guursatay Marxuum fariid oo kamid ahaa masuuliyiinta hore ee maamulka jubaland kaasoo ay isku meel ku ruux baxeen.
Geerideedana waxay taabatay bulshooyin badan oo aduunka kunool kuwaasoo isugu jira Soomaali iyo ajanabi ka qaracmay kana welwelay, kuwaasoo isla qiray inay aheyd Xidig usoo baxday bulshada Soomaaliyeed, laguna xusuusan doonno dal jacaylkeedii wadaniyada lahaa ee ay u adeegsantay inay kusoo bandhigto warbaahinta Caalamka.
Allaha unaxariisto Hodon Naaleeyeh waxay 12kii bishaan ku geeriyootay Hotel cascasey iyada saygeeda iyo dadkaloo Soomaaliyeed oo hotel ku sugnaa. Kadib markii kooxda Argagaxisada ah ee Alshabaab ay weerar ku qaadeen.
Innaa lillaah wa innaa ileyhi raajicuun Allaha unaxariisto walaasheen Hodon Naaleeyeh waxay aheyd Halyeey Aan la hilmaami doonin halgankeedii.
DAAWO:- Bahdil kadib Fanaanka BK oo dib ugu laabtay Hargaysa kana sheekeeyay cadaadiskii uu soo arkay.
Eebbe raxmaddiisa aakhiro haku wada gallado inta xaq darada iyo caddaalad xumada nafahooda ku waayay. Halyeeyad nagu qaali ah bay ahayd Marxuumo Hodan Naalleeye ee fongor haawanaysa uu booskeedu ka ahaan doono guud ahaan bulshaweynta Soomaalida xalaasha ah iyo gaar ahaan bilis xaawalaydeena.
Waxaan haba yaraato ee caqi iyo suuragal ba ahayn in kooxahan magaca “shabaab” isku baheystay wali la tirtiri waayay iyada oo ay intaas oo dawladood ciidamadoodu Koonfurta sanado badan ku sugan yihiin. Dalkani nacab sokeeye iyo shisheeye isugu jira ayaa isku gaashaanbuureystay in aanay qarannimadiisu dib ugu curanin.
Waxaan mar na jimeysnayn dhagarta halista ah ee ay nacabkan is baheystay dalkan ku curyaaminayaan iyo dhayalka ay madaxda koonfureed ku sahashanayaan. Nacabka sokeeye xawaalad ay dalka ku baahiyeen iyo dhallaan ay damiirka iyo dhimirka ba ka dileen bay ku didiyeen.
Nasiib daro se teknoloojiyaddii looga guuleysan lahaa ayaan wali loo adeegsanin sidii loo baahnaa. Dagaalka kulul ee dableydan loo adeegsanayo waxaa ka sii xun oo aan la dhaadin dagaal maskaxeedka loo adeegsaday in madaxda heerka federaalka iyo kuwa maamullada dhexdooda la iskugu jabiyo oo la iskaga na jeediyo.
Marka hore waan ku salaamay Osman Awad.
Marka labaad Hodan Naaleeye iyo intii muslim ah ee dhimatah Allaah (swt) ha u wada naxariisto.Waana la oran karaa Hodan Naleeye waxay ka dadnimo iyo waxtar fiicnayd shan nin oo ka mida kuwa hargeeysa u jooga Mushaarada iyo danaha wakhtiga gaaban ee ayaga u gaarka ah.Shaki kuma jiro in ay dhaantey kumaa kun nin.Hasea ahaatee wakhtigeedii baa dunidaan ka dhammaaday oo waxaa lagu sababay kuwa ay inkaari u ahaatay.Hodan Naaleeye jannatul fardaws ku waar Insha Allaah.
Tacsi”:(Condolences Messages)”(Marwo Hodan Naaleey)”Innaa Lilaahi Wainna Ileyhi
Raajicuun)(. I am writing on behalf of all [name’s). Allah Ha U naxariiste
Gacan ka xaq Daran Ayaa Dishay dhamaantood Qaraxii kismaayo ka dhacay?…